Burmese taste - Iora: နံနက်စာများ ၂
Ready made pizza ၀ယ်ထားတာကုို oven ထဲမှာ ထဲ့ဖုတ်ထားတာပါ။ ကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့ spring mix အရွက်တွေနဲ့ ငြုတ်သီးစိမ်း တွေကိုကုိုယ်ကြိုက်သလိုထဲ့ထားပါတယ်။ ကျမက ပီဇာကို အေးနေ ပျော့နေရင် လုံးဝမကြိုက်လို့ ပါတီတွေမှာ ကျွေးလည်း ကျွတ်နေသေးမှ ဒါမှမဟုတ် သိပ်ဆာနေမှ စားပါတယ်။ နုို့ မို့ ဆိုရင် ပြင်းတွဲတွဲကြီးကုို မကုန်မချင်းစားနေရတဲ့ ဒုက္ခ ကုိုခံစားရလို့ ပါ။
ပီဇာအစိမ်းကုို တ၀က်ခြမ်းပြီး အလူမီနမ်ဖွိုင် ထဲတင်ပြီး oven ထဲမှာ ၁၅ မိနစ်လောက်ထဲ့ဖုတ်ပါတယ်။ ချိစ်တွေပျော်လာ ပြီး အနားတွေ ကျွတ်လာတော့ အရွက်တွေ နဲ့ ငြတ်သီးစိမ်းညှပ်ထားတာတွေထဲ့ပါတယ်။ ပုံထဲကလိုပါ။ သူက အရွက်မကြိုက်လို့ ကုိုယ့်အတွက် တခြမ်းကိုဘဲ အရွက်ထဲ့ထားပါတယ်။ တခြား အသားတွေ၊ ပင်လယ်စာတွေ နဲ့ ထက်စာရင် ကြက်သား နဲ့သို့ မဟုတ် ချိစ်နဲ့ အရွက်တွေနဲ့ကိုပိုကြိုက်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ကျန်တဲ့တခြမ်း ကုို ထပ်လုပ်စားထားတာပါ။ ဒီတကြိမ်မှာ တော့ ဒယ်အိုးထဲထဲ့ပြီးစမ်းသပ်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပါတယ်။ အရွက်တွေကို နွမ်းနွမ်းကြီးမစားချင်လို့ချိစ်ပျော်တဲ့အချိန်မှာ ညှပ်ထားတဲ့ ငြုတ်သီးစိမ်းဘဲထဲ့လိုက်ပါတယ်။ ဖွင့်ကြည့်လိုက် ထဲ့လိုက် လုပ်တာအပါအ၀င် ၁၆ မိနစ်ပါ။ အညွှန်းထဲမှာ မီးဖိုပေါ်လုိုက်ပြီး ၁၆ က ၁၈ မိနစ်ဖုတ်ပါလို့ ဆုိုထားပါတယ်။ ၄၀၀ ဒီဂရီ နဲ့ ပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျမကပီဇာထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ မီးဖုိုကို ရော ဒယ်အိုးကို ရော pre-heat ထားပါတယ်။
သိပ်ပူနေတော့ အရွက်တွေချက်ချင်းနွမ်းသွားတာနဲ့ ပြန်ဖယ်ပြီးဘေးမှာဘဲပုံထားလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလိုအစိမ်းနဲ့ တွဲစားရတာ ကျမပိုကြိုက်သွားပါတယ်။
သူ့ အတွက်ချိစ် နဲ့ ပလိန်းပါ။ ဒါလည်းကောင်းပါတယ်။ ကြွတ်နေတော့လေ။
ဒါတောင်ကုန်အောင်မစားနုိုင်ကြလို့တစိပ်ရဲ့ သုံးပုံတပုံ တစိပ်စီကျန်နေကြပါတယ်။ ကျမတော့ ထပ်စားတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတော့နေ့ ခင်းဆာရင် စားမလားမသိပါ။
ငါးဖန်းမငါးပိကောင်အတုကြော်၊ ငြတ်သီးခြောက်ကြော် နဲ့ ပဲပြုတ်နဲ့ ထမင်းဆီဆမ်း
အရင်ကစားထားတာလေးပါ။ ကျမကတော့ ငါးဖန်းမငါးပိကောင်ကြော် ကြွတ်ကြွတ်လေး နဲ့ ထမင်းဆီဆမ်း ငြတ်သီးကြော် ကျွမ်းကျွမ်း ကြွတ်ကြွတ်လေးနဲ့ စားရမယ်ဆိုရင် အထက်က ပီဇာနဲ့ လဲစားလို့ စားရင် လဲ စားမှာပါ။ တရုပ်ဆုိုင်ကနေ အဲဒီငါးကို တွေ့ တော့ ငါးဖန်းမငါးပိကောင်ကြော်စားချင်သွားပြီး ကုိုယ့်ဘာသာ လုပ်လိုက်ပါတယ်။ အမေ နဲ့ ခဏခဏလုပ်ဖူးလုို့ တွေဝေခြင်းမရှိဘဲ လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ရေဆေးပြီးမှ (တချို့ မဆေးပါ) ဗိုက်ထဲဆားထဲ့ ငါးကိုလည်းဆားနဲနဲ နဲ့ နယ်ပါတယ်။ သိပ်မငံအောင်လုို့ နယ်တာကိုတော့ဆားသိပ်အများကြီးမထဲ့ပါဘူ။ ပြီးတော့ ခွက်တခုထဲထဲ့ပြီး အပေါ်က ပလတ်စတစ်အုပ်ပြီး အလေးဖိဘို့ ရှာတော့တော်တော်ရှာတာတောင်မှမရှိဘူး။
ဒါနဲ့ အပြားတစ်ခုရှာခံပြီးသူငယ်ချင်းပေးထားတဲ့ ဒါးသွေးကျောက်ကို အပေါ်ကတင်ထားခဲ့ရပါတယ်။ သိပ်တော့ အလေးမညီဘူး၊ မတတ်နိုင်ဘူးလေ။ ဒီလိုဘဲ ရှိတာနဲ့ ဖြစ်အောင်လုပ်ရတာပါဘဲ ကုိုယ်ကစားချင်တာကိုးလေ။ အပြင်မှာဘဲထာပြီးနောက်နေ့ ကျတော့ ထွက်လာတဲ့ အရည်တွေစစ်ပြီး သွန်ပေးပါတယ်။ အိမ်ထဲမှာဆိုတော့ အနံ့ ကနဲနဲ ပြင်းလုို့ နောက်နေ့ တော့ အင်္ဂလိပ်ကြောင်အိမ်ထဲမှာဘဲထဲ့ ပြီးအရည်သွန်ပေးပါတယ်။ ၃ ရက်လောက်ကျတော့ ကျမကြော်စားပါတယ်။ သိပ်စားလို့ ကောင်းပါတယ်။ သူလည်း ရန်ကုန်မှာမစားပေမဲ့ အားပေးပါတယ်။ ကောင်းတယ်တဲ့။ ခုထိရှိပါသေးတယ်။ သုံး လေးလလောက် တော့ရှိပါပြီ။ ငါးပိကောင်ကြော် ပြီး ငြုတ်သီးခြောက်ဆက်ကြော်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီဆီ နဲ့ready made ပဲပြုတ် နဲ့ ထမင်းနဲ့ နယ်ပြီး စားကြပါတယ်ရှင်။ ထပ်တောင်စားချင်လာပြီ ရေးနေရင်းနဲ့ ။
ရေနွေးကြမ်း လေးနဲ့ တွဲစားတော့ သိပ်ကောင်းတာပေါ့နော်။
မှတ်ချက်.. KOM အတွက် ပီဇာ နဲ့KNLT အတွက် ငြုတ်သီး နဲနဲဖယ်ထားလိုက်တယ်နော်။
Posted by Iora at 2:51 PM
Labels: Burmese breakfast and others
ငါးဆားနယ် လုပ်ကြည့်မလားလို့ ညနေကပဲစိတ်ကူးနေတာ
ညီလင်းသစ် March 12, 2011 at 3:55 PM
ငရုတ်သီး အနီခြောက်တောင့်တွေ တွေ့တာနဲ့ ချက်ချင်း သွားရည်ကျချင် လာရော..၊ အောက်ဆုံးမှာ ငရုတ်သီး နဲနဲဖယ်ထားတယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာ သွားတယ်၊ ကျေးဇူး..၊ တကယ်ပါ၊ အဲဒီလို ငရုတ်သီးခြောက်နဲ့သာဆိုရင် ပဲပြုတ်ထမင်းနဲ့ တင် စားလို့ရနေပြီ၊ ငါးတောင် မလိုတော့ဘူး...။ :D
khin oo may March 12, 2011 at 5:13 PM
၇ယ်ဒီမိတ် ပဲပြုတ်ဆိုတာ ဘာပါလိမ်.
ကုိုယ်စားချင်တာတွေကလည်း ငါးပိ ငါးခြောက်ထဲကကို မထွက်ဘူးဆို။
မြန်မာပြည်မှာရှိတုန်းက ဘိုစာကုို တခုတ်တရ လုပ်စားရတယ်။ ဘိုစာတွေပတ်ချာဝိုင်းနေတော့ မရှိတဲ့ရှားတဲ့မြန်မာစာတွေဘဲ စားချင်နေတယ်။ ဒုက္ခ..ဒုက္ခ..
ready made ဆိုတော့မြန်ပါတယ်။ ထပ်လုပ်ပေးပါမယ်။ ကြိုက်သလောက်သာစား။
Iora March 12, 2011 at 8:17 PM
ready made ပဲပြုတ် လို့ ပြောရတာ က ဆိုင်က၀ယ်တားတဲ့ပြုတ်ပြီးသား frozen ပဲပြုတ်ကုို ရေခဲရုိုက်ထားတာပါ။ စားခါနီးမှ microwave ထဲပြန်နွှေးပြီးစားရတာပါ။
Mon Petit Avatar March 12, 2011 at 9:34 PM
Humm, this is very self torturing just to look at those delicious food and yet not able to really eat it!
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) March 12, 2011 at 10:47 PM
ပဲပြုတ်ထက် ပီဇာကို ပိုကြိုက်တယ်း)
ပီဇာကို အေးအေးကြီးတော့ မကြိုက်ဘူး
ချိစ် များများနဲ့ ပိုကြိုက်တယ်..
အငံတောင် ပျောက်သွားပြီး အရသာ ပေါ့သွားတယ်း(
သက်ဝေ March 13, 2011 at 6:47 AM
ပြီးတော့ ပဲပြုတ်လဲ ကြိုက်ဖူး.............
ကိုညီလင်းနဲ့ ငြုတ်သီးကြော်ပဲ လုစားသွားတယ်....း))
iora March 13, 2011 at 8:26 PM
Mon Petit Avatar,
Yeah, it is kind of torturing actually as we cannot eat via images. I feel that way sometimes too. However, sometimes, it makes me less stress and happy by looking them. (i mean others' food images, not mine)း)))
ကုိုယ်လည်း ဒီနေ့ ငါးဆားနယ် လိုလို ငါးပိကောင်လိုလို ကိုရီးယားကလာတာ ချက်စားဖြစ်တယ်။ ဆားပေါ့တော့ တော်တော်စားကောင်းတယ်။
ငွေစန္ဒာ March 15, 2011 at 12:44 PM
ပဲပြုတ်ထမင်း နဲ့ ငါးဖန်းမငါးပိကောင်အတုကြော်၊ ငြတ်သီးခြောက်ကြော်ကိုမနက်ဖြန် breakfast
Sunny March 15, 2011 at 1:25 PM
အခုမှ အလည်ရောက်ဖြစ်လို့ ဟင်းတွေ ငေးရင်း လင့်လေးလည်း ယူသွားပါတယ်..
ဟုတ်တယ်နော်။။အဲလိုလုပ်လို့ ရသားဘဲ။ ဥာဏ်ကလိုအပ်ရင်မထွက်ဘူ။။မလိုရင်ထွက်တယ်။
စကားမစပ် ကျမရဲ့ ဘလောက် နံမည်က အုိုင်အိုရာ ပါ။ သူငယ်ချင်းတယောက်ကလည်းး I ကုို L လုို့ ထင်ပြီး အဲလိုဘဲ ထင်တယ်။း))
နောက်လည်းလာရောက်ပြီး ငေးရုံတင်မက ၀င် လွေး သွားပါနော်..
ခရမ်းသီးနှပ်၊ ကြက်သားကြော်၊ ခရမ်းချဉ်သီးစပ်ချဉ်၊ေ...
ငါးစုစီကြော်၊ နဲ့ လက်ဖက်သုပ်၊ ခရမ်းချဉ်သီးသုပ်၊...
မုန်လာဥသုပ်၊ ငါးအိုးကင်းပူတိုက် နဲ့ကန်ဇွန်းရ...
ငါးကြင်းဟင်း၊ ၀က်ပဲငပိ၊ တရုပ်ဟင်းနုနွယ်ရွက်ကြော်...